Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Iingcebiso ezilungileyo zokuqinisekisa uhambo olukhuselekileyo kunye nolonwabo
Ungakonwabela ukutyelela iindawo apho unokuthi ungaziwa ngokwenyani; iphantse yangathi ungomnye umntu kangangeveki okanye ezimbini. Ukuya kwiindawo ezintsha kuhlala kuzisa amandla angakumbi kunye nokulunga kuthi. Kufana nonyango olufuneka kakhulu, ukubaleka kwiingxaki eziqhelekileyo.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuhamba ngokukhuselekileyo, kuya kufuneka uthathe amanyathelo okhuseleko kuba kukho iintlobo ngeentlobo zezoyikiso onokuhlangabezana nazo. Ngamanye amaxesha, ezi zoyikiso ziwonakalisa umoya wokuhamba ngokudala isiphithiphithi esingaka, kwaye kuyadanisa.
Ke ngoko, ukuqinisekisa ukuba uhambo olukhuselekileyo nolumnandi lusemandleni akho, kwaye unokuyifeza ngokulandela ezi ngcebiso zingezantsi.
Yenza iDigital Backup yeDatha ebalulekileyo
Idatha yinkxalabo enkulu ye-digital nomads. Ke, qiniseka ukuba uhlala une-backup yolwazi lwakho lokundwendwela, uhambo lokuhamba, ukubhukisha ihotele, kunye nezinye izinto ezibalulekileyo. Ukwenza ii-backups kuya kukunika inzuzo ukuba kwenzeka nantoni na engalindelekanga kumaxwebhu akho okuqala. Ungasoloko ubuyisela uxwebhu lwakho kolu gcino kwisixhobo esitsha.
Ukongeza koku, kububulumko ukungabelani ngedatha eninzi nabanye kwiindawo zikawonke-wonke njengeekhefi ze-cyber. Kukho amathuba amakhulu okuba umntu angebe iinkcukacha zakho.
Yithi Hayi kwi-Couchsurfing
Usenokungayazi le nto, kodwa ukujonga ingaphezulu kwe-adventure, kodwa ineengozi zayo, njengokuhlala nabantu ongabaziyo kunokukwenza ube sesichengeni sobusela kunye nezinye iintlobo zokuxhatshazwa. Ke ngoko, kungcono ukuhlawula imali eyongezelelweyo kwaye uhlale kwiihotele apho unokufumana ukhuseleko olugqibeleleyo kunye nemfihlo.
Zilumkele iipokotho kwaye Ulumkele Izihlwele
Hlala uphaphile xa uzulazula kwiimarike zasekuhlaleni okanye nayiphi na enye indawo ephithizelayo. Abaqokeleli banokuzama ukubamba izinto zakho zexabiso ukuba bayazi ukuba uphazamisekile. Ke, soloko uzama ukujonga abantu ongabaziyo kufutshane nawe kwaye ugcine izinto ezixabisekileyo phambi kwesifuba sakho kunepokotho yakho yangasemva ukuze uzigcine zikhuselekile.
Yabelana nomntu ngohambo lwakho lokuhamba
Yeyona ndlela ibalaseleyo yokunceda abantu obathandayo ukuba banexhala kakhulu ngohambo lwakho. Akukhathaliseki nokuba uhamba wedwa ndaweni ithile okanye niliqela; soloko uzama ukwabelana ngohambo lwakho nosapho lwakho okanye nomntu onokumthemba. Iqinisekisa ukuba ukuba kukho nayiphi na intlekele eyenzekayo, ubuncinane umntu uyayazi indawo yakho kwaye unokufikelela kuwe.
Ke, unokwabelana ngeenkcukacha zokubhukisha kwakho ihotele okanye nayiphi na enye indawo apho uya kuhlala khona. Kwakhona, unokuya inyathelo elinye phambili ngokwabelana ngendawo ohlala kuyo kunye nabo.
Hlala uphethe iKit yoNcedo lokuQala
Kungcono ukuba ulungiselele nayiphi na imeko engxamisekileyo yezempilo kuba ukufumana uncedo lokuqala ngexesha kunokwenza izinto zibe lula, nto leyo engenakwenzeka ukuba awukakulungeli. Ngoko ke, kububulumko ukugcina ikiti encinci yoncedo lokuqala kwimithwalo yakho kwaye uyiphathe kunye nawe ngexesha lohambo. Kakade ke, khangela izikhokelo eziqhelekileyo zokuthutha ezo zinto.
Kuphephe iWi-Fi yasimahla
Abakhenkethi banokulahleka lula kwilizwe lasemzini. Emva koko, banokukhangela ngokukhawuleza inethiwekhi ye-Wi-Fi ekufutshane ukuze babone indawo yabo kwiimephu. Nangona kunjalo, lumka xa kufikwa ekunxibelelaneni neenethiwekhi ze-Wi-Fi zasimahla. Zihlala zingakhuselekanga, kwaye kufuneka fumana iVPN ngaphambi kokunxibelelana nabo. Qhagamshela kwiiseva ezikude zeVPN kwaye ube ne-intanethi yakho ibhalwe ngokukhuselekileyo.
Jonga i-Inshurensi yakho
Unokujonga ukuba yeyiphi i-inshorensi yetyala ipolisi yakho ye-inshurensi inikezela ngemithwalo elahlekileyo okanye iimeko ezingxamisekileyo zonyango ngelixa uhamba kude nekhaya. Kwakhona, ukuba awunayo i-inshurensi yokuhamba, kufuneka ucinge ngokuyithenga ngoku. Inokukhulula inani elihloniphekileyo lezinto ezibiweyo ngelixa lihamba kwaye livale iintlawulo zonyango.
Ukuba uhambela kwelinye ilizwe, kuyacetyiswa ukuba ulandele izikhokelo zokhuseleko ze-COVID-19 ukuze ukuba kunokwenzeka nantoni na, uxelele abasemagunyeni kwangoko. Kwakhona, mhlawumbi kuya kuba ngcono ukuphepha iindawo ezithile kwaye unamathele kuhambo oluninzi lwasekhaya.
Yazisa iBhanki yakho malunga nokuHamba
Kuyindlela elungileyo ukwazisa ibhanki yakho ukuba uhambela phesheya ukuze ithobe amathuba emisebenzi yobuqhophololo kwiiakhawunti zakho. Ngaphaya koko, ibhanki yakho iya kuqaphela ukuba intengiselwano egqitywe kwikhadi lakho kwilizwe elahlukileyo ivela kuwe, kwaye ayisayi kulivimba ikhadi.
Zama Ukwenza Njengabantu Basekuhlaleni
Yeyona ndlela ikhuselekileyo yokuhamba nakweliphi na ilizwe kuba awuzukutsalela ingqalelo kuwe. Yenza nje njengabantu basekhaya kwaye uzame ukudibanisa nabo. Iyakunciphisa ngokuzenzekelayo amathuba okuba nabani na aqaphele ukuba awungowasekhaya.
Kwakhona, ziqhelanise nesixeko kunye nohambo lwakho ngaphambi kokuba uhambe ehotele. Ukuba ufuna ukujonga ulwalathiso lwexesha elide, cinga ngokungena evenkileni okanye kwikhefi ukuze wenze njalo kunokuba uhlale ngaphandle.
Yenza uphando olululo malunga neNdawo ekusingwa kuyo
Kubalulekile ukwenza uphando olululo malunga nendawo ekuyiwa kuyo kunye nazo naziphi na iingcebiso zokuhamba kunye neengcebiso. Okukhona unolwazi oluninzi ngendawo oya kuyo, kokukhona ungazilungiselela ngcono. Kuya kukunceda ukuba wenze imephu yeendawo ezinokuthi zibe yingozi kuwe kwaye kufuneka ziphetshwe ukuze zikhuseleke. Kukwakho ezininzi imikhonyovu yokuhamba ukuba kufuneka uqaphele ukuze uhlale ukhuselekile. Umzekelo, ukuba umntu ongamaziyo uzama ukukunika isacholo, ungaze usithathe.
Ukuhamba kukujonga kwaye ukonwabele izinto ezintsha, kodwa kukwabalulekile ukuba uqinisekise ukuba ukhuselekile ngelixa usenjenjalo. Ukuba kukho intlekele okanye isiganeko esingathandekiyo, kufuneka uzilungiselele kwangaphambili. Kwakhona, naphi na apho uya khona, soloko ugcina iinombolo zikaxakeka zaloo ndawo ukuze uthathe amanyathelo angexesha.